You searched for the meg - Torrents Movies - Download Free Torrents Movies
Dongchul ဟာ ဘားအ​သေး​စားတစ်​ခုကို စီမံခန့်​ခွဲ​နေသူတစ်​​ယောက်​။ သူဟာ အမြဲတမ်း ​ကျောင်းသား​ဟောင်း​တွေ့ဆုံပွဲ ကို စီစဉ်​ချင်​​နေသူပါ။ တစ်​​နေ့ကျ​တော့ သူ့ဘားကို ​သူငယ်​ချင်းမတစ်​​ယောက်​ ​ယောက်​လာပါတယ်​။ Yujinဆိုတဲ့ အဲ့သူငယ်​ချင်းမ​လေးဟာ ​ကျောင်းသား​ဟောင်း ​တွေ့ဆုံပွဲတို့ဘာတို့ လည်း သွား​လေ့သွားထ ရှိတဲ့လူမဟုတ်​ပါဘူး။ ဒီလိုဘားမှာ အမှတ်​မထင်​ ​တွေ့လိုက်​တဲ့အခါမှာ သံ​ယောဇဉ်​ လက်​ကျန်​​လေးနဲ့ ချစ်​ခြင်းတရား​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာပြီး နယ်​​တွေကျွံကုန်​ကြပါ​တော့တယ်​။ တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​ လျှို့ဝှက်​ချက်​​တွေ မရှိ​တော့ဘဲ သံ​ယောဇဉ်​​တွေ တွယ်​သထက်​တွယ်​လာချိန်​မှာမှ Dongchulရဲ့ ဇနီးဟာ Dounchulဆီ​ရောက်​လာချိန်​မှာ​တော့ …. ဘယ်တွေ ဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတာ CM…
18+, Crime, Korea, Romance, UNCENSORED
Utopians ကားဟာ ၁၈+ကားတကားဖြစ်ပါတယ် ၁၈+ဆိုပေမယ့် အခုခေတ်လူငယ်တွေမမှားသင့်မှားအပ်တာတွေ မစူးစမ်းသင့်တာတွေကို message ပေးတဲ့ကားလို့ပြောတာပိုသင့်တော်ပါတယ် Drama ကားတကားပါပဲ ဒါပေမယ့် heterosexuality…bisexuality.. homosexuality…ဆိုတဲ့ အပိုင်းသုံးပိုင်းလုံးကို ထည့်သွင်းရိုက်ပြထားတာကြောင့် ၁၈+ ကားတကားလို့ ကျနော်အနေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တာပါ အဓိကကတော့ ပညာပေးကားအနေနဲ့ ရိုက်ပြထားတဲ့ကားဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားချစ်သူတွေ….မင်းသားက ဒသနိကနယ်ပမယ်မှာ အတွေးလွန်ပြီးတော့ စူးစမ်းလေ့လာချင်သူတဦး… သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကြားထဲကို သမရိုးကျဇာတ်လမ်းတွေအတိုင်းပဲ ကြားလူတယောက်ဝင်လာပါတယ်…သူကတော့ အဲ့ဒီစုံတွဲရဲ့ စာသင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာပဲဖြစ်တယ်….ကျောင်းဆရာကလည်း စာစသင်တဲ့အချိန်ကတည်းက သူ့ဖာသာသူ Homosexuality အမျိုးအစားပါလို့ File size…(850MB) Quality…Blu-Ray…
Dark Side Production မှတင်ဆက်သည်။ IMDb 6.3) ဒီဇာတ်​ကား​လေးက​တော့ လိင်​ကိစ္စတက်​ကြွ​နေဆဲဖြစ်​တဲ့ လူငယ်​​လေး​တွေရဲ့ သဘာဝကို ဟာသ​နှောပြီး ရိုကြ်​ပထားပါတယ်​ ဇာတ်​ကားထဲမှာ စုံတွဲ ၅တွဲပါဝင်​ထားပြီး တစ်​တွဲနဲ့တစ်​တွဲရဲ့ လိင်​ဆက်​ဆံဖြစ်​ပုံ​လေး​တွေကလည်း မတူညီကြပါဘူး ။ ပြီး​တော့ ဝမ်းသာစရာက….. ဇာတ်​ကားတစ်​ကားလုံးကလဲ ကုတင်​​ပေါ်မှာတင်​ အဆုံးသတ်​သွားတာဆို​တော့ကာ…….. ၁)Friends ပထမစုံတွဲက သူငယ်​ချင်း​တွေပါ ။ငယ်​ငယ်​တည်းက ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ သူငယ်​ချင်း​တွေဖြစ်​ပြီး လိင်​ကိစ္စအာသာ​ပြေဖို့ သက်​သက်​သာ ဆက်​ဆံကြမှာပါ။ ၂)Room-mate ဒုတိယအတွဲက​တော့ ဆန်းကျယ်​စွာပါပဲ လူ ၃​ယောက်​ ဖြစ်​​နေတာပါ။ သူ့​ကောင်​မ​လေးကို…
18+, Comedy, Drama, Romance, UNCENSORED
ငယ်စဉ်ကအတူကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ချစ်သူနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့သော်လည်း ဖခင်အမတ်ကြီး အသတ်ခံရမှာစိုးတဲ့အတွက် မိဖုရားဖြစ်လာခဲ့သူ ဟွယွန် ဟွယွန်ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားသော်လည်း လက်လွတ်ခဲ့ရပြီး ဘုရင်ဖြစ်လာမှ မရမကယူချင်နေတဲ့ ဆောင်ဝမ် အမတ်ကြီးသမီးနဲ့ချစ်မိလို့ ယောက်ကျားစစ်စစ်ဘ၀ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီး လက်စားချေဖို့အတွက် နန်းတွင်းထဲကို ကုန်းကုန်းအဖြစ် ၀င်ရောက်လာသူ ကွမ်ယို အာဏာမက်မောလွန်းတဲ့အတွက် လက်ရှိဘုရင်ကိုသတ်ပြီး သားဖြစ်သူ ဆောင်ဝမ်ကို ရုပ်သေးဘုရင်အဖြစ် အသုံချပြီး နန်းတော်ကိုချယ်ခြယ်နေတဲ့ မယ်တော်ကြီး အဲဒီ ဇာတ်ကောင်တွေဦးဆောင်တဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာ အာဏာ၊ တဏှာ၊ အချစ်၊ မိခင်မေတ္တာနဲ့ လက်စားချေမှုတို့ကို ပြသထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ အာဏာဟာ လူတွေကို ဘယ်လောက်စေစားနိုင်လဲ၊…
Genius Consulting isarecruiting company that provides Board of Members of large corporates and professional talents to China. As the original secretary for Joo Yeong-cheol, CEO of the company went on her maternity leave, Ji-won,anew secretary is…
WARNING: Contain nudity and Strong Sexual Content, this movie may not be suitable for some viewers. Title: The Japanese Wife Next Door Year:2004 Directed: Yutaka Ikejima Genre: Erotic Comedy Runtime: 1h 0mn Country: Japan Language: Japanese Cast : Reiko Yamaguchi,…